Induction utsotso Furnace
Induction richipedza Machine
Nokuchengetedza & Kukanda kushandisa michina
Chii induction kudziyisa?
Wokutanga akawana Chiitiko kuti induction munhu ndiye Michael Faraday, induction chinoshamisa izwi rinoreva Coil of conductive zvinhu (zvakadai mhangura). Current runoyerera napakati coils, uye remagineti iri zvakapararira munyika uye vakakomberedza coils. Mano remagineti aite zvinoenderana coils magadzirirwo chitsama ano achishandisa coils.
Kutungamirirwa remagineti kunoenderana achitungamirirwa ano. Naizvozvo, kuchinja nenzira iri rakatumbuka kuitika kuburikidza coils hunokonzera kutungamirirwa remagineti kushandura, uye mwero kuchinja kwakafanana mwero yekupindurwa rakatumbuka ano. 50 Hz AC kunokonzera simba remagineti kushandura ka50 muna mumwe wechipiri. 400 kHz AC kunokonzera simba remagineti kushandura 400,000 nguva mune imwe wechipiri.
Kana workpiece pamusoro conductive zvinhu anoiswa ari kuchinja remagineti (akadai remagineti kunotangira ane rakatumbuka razvino), mumwe voltage iri zvakapararira munyika workpiece (mutemo Faraday raMwari). The vakafurira voltage kuchaunza aibuda maerekitironi Ndirwo ano! The kuitika kuburikidza workpiece riri pakatarisana kutungamirirwa magetsi ari coils. Izvi zvinoreva kuti tinogona kudzora kakawanda zviri kuitika munyika workpiece nokudzora kakawanda zviri kuitika munyika coils.
Kana ano inopfuura nomunyika svikiro, sangano iri maerekitironi anosangana zvimwe nemishonga. Kuramba uku kunoratidzwa nokupisa (gst boces kudziyisa kushanda). Kunyange zvazvo kunokonzera kurwisa kwemashoko kuti aibuda maerekitironi sezvo magetsi ichipfuura acho, zvikuru kupisa iri vanowanika, zvingadarowo kuti vakuchidzire mashoko zvikuru conductive zvinhu (zvakadai mhangura) achiedza Kutemeswa iyezvino. Fani iyi zvinokosha chaizvo kuti induction kudziyisa.
Ndeipi kwakakwana akagadzirwa induction kudziyisa enyika?
Kazhinji, kutaridza induction kudziyisa hurongwa kusanganisira: simba zvitengeswa,
vira muviri uye mvura kutonhora chikamu.
Iyo nzvimbo inogona kushandiswa induction kudziyisa?
Foundry, nokuchengetedza, Tempering, Quenching.etc
Shandong Rongtai Induction Technology Co., Ltd. chinhu National yepamusorosoro zvebhizimisi subordinating nyika-kirasi mukuru-magumo michina manufacturer- Himile Group.
Melting Furnace Copper, Induction Metal Melting Oven, Mini Melting Furnace, Heat Treatment Induction Furnace, Aluminum Shell Medium Frequency Furnace, Graphitization Furnace,